Dowladda Kenya ayaa sababeysay waxa sababay in wasiirro iyo Xildhibaanno ka tirsan Dowladda Soomaaliya loo diido in fiisaha Kenya loogu dhufto baasaboorradooda.
Saraakiil ka tirsan Waaxda Socdaalka Garoonka Diyaaradaha ee JKIA ayaa waxaa ay sheegeen in Wafdiga dowladda Soomaaliya ay ahayd in ay fiisaha Kenya kaga soo dhufsadaan Baasaboorka Safaaradda Kenya ee ku taalla Muqdisho.
Saraakiishan oo diiday magacooda in loo adeegsado warbaahinta ayaa waxaa ay mas’uuliyiinta ka socda dowladda Soomaaliya eek u xayiran Nairobi ku amreen in ay ku laabtaan Magaalada Muqdisho safaaradda Kenyana kaga soo dhufsadaan fiisayaasha ay doonayaan in ay ku galaan Kenya.
Wasiirrada iyo Xildhibaannada ayaa qorshuhu ahaa in maanta oo talaado ah ay Magaalada Nairobi uga qeybgalaan Barnaamij uu maalgeliyay Midowga Yurub,kaas oo looga hadlayo sida loo maamulo khilaafyada ka dhasha isaga gudbidda sohdimaha.
Ilo lagu kalsoonyahay ayaa u xaqiijiyay Mustaqbal Radio in dowladda Kenya ay 13kii Bishan May safaaradda Soomaaliya ee Kenya ku wargelisay una dirtay warqad sheegeysa in Mas’uuliyiinta dowladda ee wata Baasaboorka Diblomaasiga ah ay fiisaha kaga soo dhufsadaan Safaaradda Kenya ee Muqdisho.
Waxa jira warar soo baxaya oo sheegaya in Danjiraha Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uusan dowladda Federaalka ah ku wargelinin warqadda soo baxday 13kii Bishan May.
Xubnaha loo diiday in ay galaan Magalada Nairobi waxaa ka mid ah Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha,Cismaan Libaax, Sentaor Ilyaas Cali Xasan oo ka tirsan aqalka sare iyo Senator Samsam Daahir.
Tan iyo February sanadkan markii ay Dowladda Soomaaliya xermooyinka shidaalkeeda ku soo bandhigtay shirka dhacay London dowladda Kenya ayaa kordhisay cadaadiska siyaasadeed ee ay saartay dowladda Soomaaliya.
Waxaa ay ceyrisay danjirihii Soomaaliya ee Nairobi iyada oo keediina la baxday,waxaa ay dib u billowday duullimaadyadii lagu baari jiray Wajeer,oo markii hore Muqdisho iyo Nairobi toos u aadi jiray,waxaa ay oggolaaday in dalkeeda ay ku shiraan mucaaridka dowladda oo ay diiddaneyd labadii sano ee la soo dhaafay,waxaana hadda ku xigtay oo ugu dambeyay mas’uuliyiinta dowladda ka socda ee loo diiday fiisaha Kenya.
Dowladda Soomaaliya oo dhacdooyinkaas oo dhan hal mar ka hadashay ayaa ku sababeysay in ay yihiin dagaal siyaasadeed oo ay dowladda Kenya ku heyso SOomaaliya sida uu horay ugu dhawaaqay Maxamed Cabdullahi Salaad Oomar Wasiirka Gaadiidka iyo duulista Hawada Soomaaliya.